Originally uploaded by Paulvision
आज आफ्नो जन्मथलो छोडी बिदेश आएको पनि २ बर्ष कटेर ३ बर्ष भैसके । गाउँ-ठाउँमा के कस्तो भइराखेको छ होला भनि मनमा लागिरहन्छ । कहिलेकाहिँ घर चटक्कै पुगिहालूँ जस्तो पनि लाग्छ । यस्तो गह्रा अनि भत्केका कान्ल्हा नदेखेको पनि धेरै भो । तर के गर्नु, परदेशको बसाइ, नेपालको एउटा जिल्लाबाट अर्को जिल्लासदरमुकाम माइक्रो बस चढेर पुगे जस्तो पुगिन्न । बादल माथि-माथि नऊदे, नपुगिने । कुरा जताबाट पनि आखिर पैसो कै हुन्छ । अझ पैसोको त के नामोनिशान कुरा भयो र, हरियो हरियो पत्ता डलर कै कुरा अगाडि आउछ । अब त्यो पनि खोइ कताबाट पो आउँछ । तीन जनाको परिवारको चाँजोपाँजो मिलाउदा अलिकतीले पुग्ने होइन । अमेरिका भनेपछि कत्तिलाई त डलर पनि यता नेपालमा आलुबखडा लतरम्म फलेजस्तो फल्छ भन्ने लाग्दो होला । साथीभाइसँग कुरा गर्‍यो, कहिले फर्किने भनि सोध्छ । पैसा छैन भन्यो, पत्त्याउँदैन । साउने झरी आयो कि दीप श्रेष्ठको गीत “हर रात सपनीमा ऐथन हुन्छ, गाउँमा शायद खेतै बग्यो की” भन्ने मनमा गुन्जिन्छ । बुढो बा-आमा के गर्दै बस्दो हो भन्ने सुर्ता लाग्न थाल्छ । घर जाने इच्छा झन उर्लेर आउँछ । झन यो जाडोमा कही कतै हरियो नदेख्दा मनमा दिक्क लागेर आउँछ । अनि मनमनै कल्पेर आफ्नो जन्मभूमी नेपाल अनि आफ्नो जन्मथलो खोकना पुग्छु । कसैले यसरी अन्लाईनमा राखेको फोटाहरू हेरेर भए पनि चित्त बुझाउँछु । होईन, एउटा कुरा मैले बुझिँन, देश छोडेपछि किन झन देशको माया लागेर आउँछ ? यताको गाडीको सयरभन्दा किन त्यो उकालि-ओराली मन परेको ? रत्नपार्कको छहारी अनि जाडोमा घाम ताप्दै बदाम र सुन्तला छोडाएर खाने के साह्रो इच्छा जागेर आउँछ बा ! हात्तिबनको काफल, खोकना पारिगाउँको भोगटी, बाटोको म:मा चा, छोइला, कचिला, दायेकला, आलु-तामा, चौह्रासी ब्यञंजन नेवारी भोज अनि हात र मुखनै कालो हुनेगरी मकै पोलेर खाने दिन अब कत्ति दिन, बर्षसम्म कुर्नुपर्ने हो खोइ कुन्नी !!
Satya Maharjan January 13, 2010 Mixed Bag
Previous Previous post: Beginning of Day – Then and Now
Next Next post: Beginning of Day – Then and Now